Zimbabwe nemusi weMuvhuro yakatambira dzimwe nhomba dzedenda reCovid-19 kubva kuChina panguva iyo paine kurudziro yekuti hurumende ishande zvakasimba kuti nhomba idzi dzitengwe dzakawanda kuitira kuti dzikwanire veruzhinji.
Zimbabwe yawana dzimwe nhomba zviuru mazana manomwe (700 000) dzeSinopharm dzabva kuChina.
Nhomba idzi dzasvika munyika manheru ano mushure mekusvika kwenhomba zviuru mazana masere (800 000) dzakabva kuChina zvakare.
Mukuru anoona nezvechirwere cheCovid 19 muhofisi yemutungamiri wenyika, Doctor Agnes Mahomva, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti nhomba dzeCovid 19 dziwande munyika kuitira kuti dzishandiswe mukurwisa denda iri.
Doctor Mahomva vatiwo vanhu vanofanira kuramba vachienda munzvimbo dzose dziri kubayiwa nhomba idzi kuitira kuti vakwanise kubayiwa vozvidzivirirawo kudenda reCovid 19.
Asi vaimbove gurukota rezvehutano uye vari munyori anoona nezvehutano muMDC Alliance, Doctor Henry Madzorera, vatiwo hurumende inofanira kutenga nhomba dzakawanda nguva imwechete kuitira kuti veruzhinji vasanetseke kuwana nhomba idzi.
Hurumende inoti vanhu vakabayiwa nhomba yekutamba kusvika mukupera kwezuva reChitatu vave miriyoni imwe nezviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevashanu (1 562 285) uye vakabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana manomwe zvine gumi nezvitatu nezana rimwe chete nemakumi matatu nemumwe chete (713 131).
Vanhu vakabatwa nechirwere ichi kubva pachakatanga kupinda munyika ichi vave zviuru zana nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe (103 567) uye vapora vave zviuru makumi manomwe nechimwe nemazana matatu ane makumi masere nevatatu (71 383).
Bazi rezvehutano rinoti vanhu makumi matanhatu (60) vakafa nezuro zvabva zvasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe pazviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi mana (3 340).
Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba kuvanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika.